Ihowuliseyili ibhegi yabasetyhini engaqhelekanga, isitayile sabasetyhini esingaqhelekanga, isatchel yabasetyhini, ibhegi yabahambi, abavelisi bengxowa yezithambiso kunye nabathengisi - i-Dongguan Yihua Handbag Co., Ltd
I-Dongguan Yihua Handbag Co, Ltd.
Inkampani yethu ibhalise i-Dongguan Tianqin Packaging Products Co, Ltd. ngo-2010, ethi ivelise ikakhulu zonke iintlobo zeemveliso zokupakisha; ngo-2020, siza kuphuhlisa ishishini lesikhwama kunye nokuseka iDongguan Yihua Handbag Co., Ltd. ukuvelisa iimveliso ezahlukeneyo zokuthunga; ungenziwa ngemfuneko ngokweemfuno Ukuqinisekisa kunye nokuveliswa kweebhegi ezahlukeneyo, iingxowa zokuthambisa, iingxowa zezixhobo, iingxowa zamagxa zamadoda nezabafazi, iingxowa zolonwabo, njl .; kunye nomgangatho ophezulu, iimveliso zithunyelwa ikakhulu eYurophu, eMelika, eJapan, Korea kunye nakwezinye iindawo ezikumzi-mveliso weDongguan. Umzi-mveliso unazo zonke iintlobo zezixhobo zemveliso. Inika inkonzo yokumisa enye ukusuka kuyilo lwesampulu kwangoko kunye nobungqina bokuthengwa kwexesha eliphakathi kunye nemveliso ukuthunyelwa kwemveliso okugqityiweyo kamva.